laacibfm.com » WARBIXIN: Barcelona Miyey Ku Qaldantay Shaqo Ka Cadhinta Tababare Ernesto Valverde?
WARBIXIN: Barcelona Miyey Ku Qaldantay Shaqo Ka Cadhinta Tababare Ernesto Valverde?
Barcelona ayaa xalay shaqada ka cadhisay tababaraheedii Ernesto Valverde, waxaanay ku go’aan qaadatay saddex natiijo oo saddex waddan oo kala duwan ay kooxdu ka heshay.
Arrinta koowaad ee ay diiwaanka uga fiirisay Barcelona tababaraheedu waxay ahayd natiijada kulankii laba sannadood ka hor ka dhacay magaalada Rome ee ay kooxda AS Roma 3-0 ugu soo dhiibtay lugtii labaad ee semi-finalka Champions League iyadoo ciyaartii hore ee ka dhacday Camp Nou ay 4-1 ku kala baxeen, taaas oo sababtay in kooxda reer Catalonia ay ka hadho Champions League.
Dhacdada labaad ee uu sababsaday Ernesto Valverde waxay ahayd natiijadii taas ku dhoweyd ee Barcelona ay kala soo kulantay Liverpool sannadkii xigay oo ahaa xili ciyaareedkii hore, markaas oo Barca ay lugtii hore ee semi-finalka ku badisay 3-0, hase yeeshee markii la isla tegay England iyo garoonka Anfield ay Liverpool ku adkaatay 4-0, sidaana kaga reebtay Champions League.
Midda ugu dambaysa ee soo afjartay waayaha Ernesto Valverde waxay ahayd natiijadii ay kala kulantay semi-finalka Spanish Super Cup ee Khamiistii ay magaalada Jeddah ee waddanka Saudi Arabia kula ciyaartay Atletico Madrid, kaas oo kooxda Valverde ay 2-1 ku hoggaaminaysay illaa laga soo gaadhayey tobankii daqiiqadood ee ugu dambeeyey, markaas oo Atletico ay ciyaarta ka dhigtay 2-3, sidaana ay Barcelona kusoo hadhay.
Saddexdan natiijo ee ay kooxdu kala soo kulantay saddexda magaalo ee saddexda waddan ee kala duwan, ayaa si buuxda u go’aamiyey in tababare Valverde uu noqdo tababarihii ugu horreeyey ee muddo 17 sannadood ah ay Barcelona shaqada ka caydhiso, waxaana midkii ugu dambeeyey ee ay kooxdu sidan oo kale u erido uu ahaa Louis van Gaal oo xili-ciyaareedkii 2002/03 shaqada laga caydhiyey, intii ka dambaysayna waxay kooxdu isticmaashay siyaasad ah inay macallimiinta ku qanciso in ay iyagu is casilaan.
Haddaba, Barcelona miyey ku saxsanayd go’aanka shaqada ay kaga caydhisay tababaraheeda Ernesto Valverde?
Wargeyska Marca ee kasoo baxa waddanka Spain ayaa soo ururiyey xogta tababaraha la eryey ee muddadii labada sannadood iyo badhka ahayd ee uu shaqada kooxda soo hayey.
Waxa uu kula soo guuleystay laba jeer oo isku xigta, horyaalka waddanka Spain ee LaLiga oo uu waddo ka mariyey Real Madrid iyo Atletico Madrid, sidoo kalena waxa uu ku darsaday Copa del Rey oo sannadkii 2018 uu kooxda u qaaday, sannadkii xigay ee 2019-kana ay soo gaadheen finalka oo ay Valencia ka qaadday.
Marka laga yimaaddo koobabka, waxa uu kooxda layliyey 95 kulan oo horyaalka LaLiga ah, kuwaas oo 81 ka mid ah ay kooxdu hoggaanka haysay, waxaanay muddadaas soo dhaliyeen 238 gool oo ka dhigan in ciyaar walba ay shabaqa taabsiinayeen celcelis ahaan 2.5 gool, halka iyagana laga dhaliyey 88 gool oo celcelis ahaan noqonaya in kulankiiba laga dhaliyey wax ka yar hal gool (0.92).
Wadarta guud ee ciyaaraha uu Valverde hoggaamiyey Barcelona waxay ahaayeen 145 ciyaarood oo 97 ka mid ah ay guuleysteen, 32 barbarro galeen 16 kali ahna laga badiyey.
Marka la eego xogtan, Barcelona way ku degdegtay inay tababaraheeda shaqada ka caydhiso, laakiin midda ay jamaahiirta kooxda iyo maamulkuba doonayeen waxay tahay inay ka sare uga baxaan tartamada maxalliga ah oo ay guulo ka keenaan kuwa Yurub sida Champions League, kuwaas oo ay niyad-jab kaga dhamaysteen labadii sannadood ee uu Valverde xilka hayey.